नुवाकोट कांग्रेसको भाबी नेतृत्व - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७८ असोज ९ गते ६:२६
एक जना सबल व्यक्तिले सफल राष्ट्र निर्माण गर्दछ । उदाहरणहरु पेश गर्न नपर्ला । साँच्चै इच्छा शक्ति भएको मान्छेको कमि वा त्यस्ता व्यक्तिको राजनैतिक क्षेत्रमा उदय नहुनु समग्र देशको दुर्भाग्य हो ।
नेपालको सबै भन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस आफ्नो चौधौ महादिवेशन गर्नमा व्यस्त छ । पार्टीको कार्यदिशा नेतृत्व लगायत अन्य विविध विषयमा यसले प्रबेश पाउने छ । धेरै जसो समय सिमित व्यक्तिहरु बिचको आपसी समझदारीबाट कार्य दिशा निर्धारण भएको हुनाले बहुसंख्यक साथीहरु फड्के किनारमा साक्षी लाग्न लामबद्ध हुन्छन् किनकि ति सबै झुण्ड झुुण्ड गुटका साधरण सदस्य देखि नजिकका अर्थात महत्वपुर्ण सदस्य भएको हुनो बाध्य देखिएका छन् ।
बिधानत साधारण सदस्य भएको २ वर्ष पछि कृयाशिलताको आधारमा स्थानिय कमिटिबाट सिफारिस भएको व्यक्ति क्रियाशिल सदस्य बन्न योग्य लेखिएता पनि स्थानिय स्तरबाट नै गणितिय खेलमा नेतृत्व हत्याउन आफ्नै नाता गोता र परिवार भित्र नै कांग्रेस रुमलिएको अबस्था छ । त्यसलाई प्रसय उपल्लो निकायका व्यक्तिहरुको आदेश अन्ुसार चलेको अबस्थाले गर्दा बास्तबमा कांग्रेस सबैको र सधैको कांग्रेस नभएको अबस्था हो । कसैले कति कृयाशिल सदस्यता भर्ने, कस्को भागमा कति ? को कहाँ फर्केका छन् भन्ने लेखाजोखाका साथ दिइने कृयाशिल सदस्यले के साच्चिकै कांग्रेस थामिरहला त ? फलाना दाजु र फलाना दिज्युको आदेशबाट जबसम्म पार्टीले राम्रो व्यवस्थापक (कुशल नेतृत्व) को परिकल्पना गर्न नसक्ने अबस्था छ ।
नेपाली कांग्रेसको बस्तुपरक सैद्धान्तिक बहस, प्रशिक्षणको बारेमा नेतृत्व धेरै पटक चुकेको अबस्था छ । राजनैतिक क्षणिक समस्या र व्यक्तिमा रुमmिलएको छ । एउटा गैरसरकारी संस्थाको अबस्थामा रहेको छ, तत्कालिन समस्या जे छ त्यहिलाई समाधान तर्फ बढी केन्द्रीत भएको हुनाले यसको दिर्घकालिन र पछि हुन सक्ने सकारात्मक सम्भाबनालाई अर्थात परिबर्तनलाई आत्मासात गर्न नसकेको अबस्था छ ।
सधैजसो २०४६ को परिबर्तन पछि शक्तिको राम्रो अभ्यास चाहे पार्टीमा होस् वा सरकारमा होस् नुवाकोट जिल्ला केन्द्रमानै रहेको छ । स्वभाबिक नै मान्न पर्छ ठुलो रुखहरुको बिचमा ससानालाई सेप लाग्दछ नै तर पनि ठुला रुखको बिउबाट बेर्ना पनि उत्पन्न हुन्छ यो सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैले पनि नुवाकोट कांग्रेसको अधिबेशनलाई सबैले महत्वका साथ नियालिरहेका छन् । सबै नेताहरु खाल जमाउन व्यस्त छन् र च्याखेहरु कुन दाउ पर्ला भनि दाउ चालिरहेका छन्, च्याखेहरुले पनि खाले खाले बिचका साउ नखाने र (खाले मिलि) भएमा च्याखे टाट पल्टने अबस्था रहेको छ ।
सम्पन्न सबै वडा अधिवेशनलाइ मध्यनजर गर्दा धेरै जसो वडाहरमा सर्बसम्मत रुपमा अधिवेशन भएको छ । यसले आगामी नजिकिएको स्थानिय तहको चुनाबलाई पनि कांग्रेसको लागि सुरुवात हो, अधिकांश वडाहरुमा स्वतस्फुर्त रुपमा युवाहरुको नेतृत्वमा आकांक्षा सकारात्मक रुपमा रहेको छ जसलाई नेपाली कांग्रेसको कार्यदिशा समाहित गर्नु अबको नेतृत्वको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।
युवाहरुको उत्साहजनक प्रतिनिधिलाई दिनहुँ हरियो पासपोर्ट बोकी एयरपोर्टमा लाइन बस्ने जमातलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कांग्रेसको जमात होकी भन्ने गन्ध आएको छ । अलि फरक सोच र वस्तुपरक कांग्रेस अर्को नेपालीहरुको अपेक्षा छ, माइतीघरको मण्डलामा प्लेकार्ड बोकी दगुर्ने जनता कपी र कलमको झोला बोकी नयाँ भविष्य खोज्नेका लागि भौतारिने जमात्त आफ्नो अधिकारको लागि पटक पटक लागिरहनु पर्ने जनतालाई वास्तवमा नै सम्बोधनको आवश्यकता छ । नागरिकको दर्जामा उभ्याउन खोज्ने जमात्त, चेरा फुटिएका टोपी लगाउने किसानको पसिनाको गन्ध पहिचान गर्ने नेतृत्व अबको आवश्यकता छ ।
सम्भवत यी सबै समाजलाई नजिकबाट नियाल्ने नेतृत्व आगामी अधिवेशनबाट छानिने छ । परिवारवादको लान्छना नेपाली कांग्रेस नुवाकोटले पटक पटक सामना गर्नु परेको छ , जात्तीय र साम्प्रदायिक कुराले पनि उतिकै नुवाकोटको वजार तातिएको छ । कांग्रेसले यी सबै विषयवस्तुलाई आगामी कार्यकालको मुल मुद्धा बनाउन सके समग्र देश भरिका कांग्रेसजनबाट गतिलो प्रशंसा पाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । के यी सबै समस्यालाई विदुरको लोकतान्त्रिक चौताराबाट गोगबु –महाराजगञ्ज सम्म लाम लाग्ने धावकहरुबाट निस्केला त ?
लेखक दिपक लामा नेपाली कांग्रेसको पुर्ब जिल्ला सहसचिब हुनुहुन्छ ।